कसले गर्‍यो एमाले पार्टी एकता रोक्न भीम रावललाई धम्कीपूर्ण फोन ? - Pnpkhabar.com
कसले गर्‍यो एमाले पार्टी एकता रोक्न भीम रावललाई धम्कीपूर्ण फोन ?
काठमाडौं, ३० असार : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास नगर्न आफूलाई धम्कीपूर्ण फोन आएको बताएका छन् । उनले कार्यदलमा एमाले विभाजन रोक्ने प्रयास नगर्न आफूलाई केही राजनीतिक दलका नेताहरुबाट दबाब र धम्कीपूर्ण टेलिफोन आएको बताएका हुन् ।
रावलले आफूलाई कसले धम्की दिए भन्ने खुलाएका छैनन् । तर, एमाले विभाजन रोकिने पो हो कि भनी कतिपयलाई देखिने र बुझिने गरी लागिरहेको रिंगटाको पर्दा उघारी दिनुपर्छ कि जस्तो लागेको भन्दै सांकेतिक रूपमा खुलाएका छन् । एमाले कार्यदलले असार २७ गते राति पार्टी एकताको सहमति गरेको थियो ।
माधव नेपाल समूहका नेता रावलको ओलीसँग निकटता बढेको र उनले पदकै लागि कार्यदलमा सहमति गरेको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन् । तर उनले आफ्नो चरित्र ह त्या गर्न भ्रामक समाचार प्रकाशित गरिएको बताएका छन् । उनले ओलीसँगको भेटमा पदका बारेमा छलफल नै नभएको बताए ।
माधव नेपाल निवासमै बसिरहेका बेला विष्णु पौडेलको फोन आएको र रघु पन्तसहित बालुवाटार आउँछु भन्दा एक्लै आउन भनिएपछि एक्लै गएर पार्टी एकताको लागि कार्यदल सक्रिय गराउन ओलीलाई आग्रह गरेको बताएका छन् । एमाले नेता रावलले २० असारमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटेको कुरा वरिष्ठ नेता नेपाल र रघुजी पन्तलाई जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
रावलले उक्त विज्ञप्तिमार्फत पार्टी मिलाउन आफूले अडानयुक्त पहल गर्दा षडयन्त्रमूलक ढंगले भारतीय गुप्तचरसँग भेटेको तथा केपी ओलीले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएको जस्ता कुप्रचार भएको बताएका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रावलले भनेका छन्, ‘एमाले कतै विभाजनबाट रोकिने पो हो कि भनेर कतिपयलाई देखिने र बुझिने गरी लागिरहेको रिंगाटाको पर्दा उघारीदिउँ कि जस्तो पो लाग्छ ।’